ရွှေမှုန်လေးတွေနဲ့ မျက်နှာတဝိုက်လင်းလက်စေမယ့် Gold Foil Face Gloss! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ရွှေမှုန်လေးတွေနဲ့ မျက်နှာတဝိုက်လင်းလက်စေမယ့် Gold Foil Face Gloss!
ကြည်လင်ပြီး စေးကပ်ခြင်းမရှိတဲ့ ဒီ Liquid Face Gloss လေးကို ရွှေမှုန်လေးတွေနဲ့ ဖန်တီးထားပြီး လင်းလက်တောက်ပတဲ့မျက်နှာလေးဖန်တီးနိုင်ရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ လိမ်းလိုက်တဲ့အခါ Lightweight ဖြစ်တဲ့အပြင် Nourishing formula ပါဝင်တာကြောင့် မျက်နှာပြောင်ပေါ်မှာလည်းကောင်း Foundation အသုံးပြုပြီး shimmer အနေနဲ့လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပါးရိုး၊ မျက်ခွံပေါ်တွေမှာသာမက နှုတ်ခမ်းမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး စိုရွှန်းလင်းလက်တဲ့ အသွင်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်း သေချာစီစစ်ထားတာကြောင့် အသားအရေအတွက်ထိခိုက်နိုင်မယ့် Product မျိုးပါမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ပိုမိုအသက်ဝင်တဲ့ အလှတရာတွေကို ပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် Milk Makeup Products တွေဟာ နေရာတနေရာတည်းမှာ သီးသန့်အနေနဲ့ အသုံးပြုရန်ကန့်သတ်ထားခြင်းမျိုးလည်း မရှိသလို နေ့၊ ည မရွေးကြိုက်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသလို လွတ်လပ်စွာဖန်တီးနိုင်ပြီး သူမတူတဲ့ Look မျိုးကိုရရှိနိုင်မှာပါ။ နှုတ်ခမ်းသားမှာအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်နှစ်သက်ရာ အရောင်ကို Base အနေနဲ့ အရင်ဆိုးပြီး Gold Foil Face Gloss လေးကို ထပ်လောင်းအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါ အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းတစုံကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာပါ။ Base ကိုဆိုးတဲ့အခါ Matte Type ဖြစ်နေပါက အသုံးပြုရတာပိုမိုအဆင်ပြေမှာပါ။ မကြာသေးမီကမှ Market ထဲကို အသစ်ချပြလိုက်တဲ့ Product ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၂၀ ကစပါတယ်။ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ ပြန်ရတဲ့ Quality ရယ် အသုံးဝင်ပုံတွေက အရမ်းကောင်းတာကြောင့် ယခုခေတ်အချိန်အခါမျိုးမှာ မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Product လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.milkmakeup.com
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Korean Style Look လေးကို ဖန်တီးပေးမယ့် 3CE - Blushed Kit